eHimalayatimes | विचार/साहित्य | बेलडा“गीबाट अमेरिकाको तयारी
22nd July | 2018 | Sunday | 12:22:29 PM
बेलडा“गीबाट अमेरिकाको तयारी
विश्व सिग्देल POSTED ON : Saturday, 23 September, 2017 (10:12:55 AM)
वसन्त मुखैमा छ । छिमेकीका घर अगाडिका बाँसमा ठड्याइएका ध्वजाहरू हावामा फर्फराइरहेका छन् । छिन–छिनमा उखर्माउलो गर्मीले भिजेका अनुहारभरि वसन्त आगमनसूचक ताता, बालुवा, थप्पड हान्छन् । छारोले भरिएका आ“खा माड्दै उनी सेक्टर– एफको हट नम्बर ११ भित्र पस्छन् अनि निस्कन्छन् एक आङ्खोरा पानी लिएर, एक्कै सासमा उनी आङ्खोरा रित्याउ“छन् अनि सोच्छन् उता किरानमा अहिले त हिउ“ परेको होला र आ“खा अगाडि उनको भुटानको किरानको घर आउ“छ । घर अगाडिको बारी अनि लहलह धान झुल्ने खेत आउ“छन् । उनी अर्थात वेदनिधि अधिकारी (५१) दमक–१ बेलडा“गीको शरणार्थी शिविरमा आफ्नो गुमेको स्वर्ग कल्पदै आफ्ना लामा पट्यायरलाग्दा दिनहरू काट्दै छन् ।
उनको किरानमा छ एकड बारी थियो । मौसम अनुसार बारीमा कोदो, मकै, आलु फल्थे । नेपालीको कर्मै दुःखी जता गए पनि उही त हो । खेतिपाती, घर, गोठ भएको दुई एकड खेतमा भने गहु“, धान बाली हुन्थ्यो र पा“चजनाको परिवार दुःखजिलो गर्दै पेट पाल्दै थिए । मेलापर्वका लागि नेपालीमूलका आफ्नै दाजुभाइ थिए र चाडपर्व, मेलापात, मर्दापर्दा, वरिपरि झुरुप्प आफ्नै दाजुभाइ जम्मा हुन्थे । जीवन आनन्दले कट्दै थियो । अचानक प्रजातन्त्रको गुण स्वतन्त्रका युग भनी कहलिएको एक्काइसौं शताब्दीमा राजा जिग्मेले निरकुंशता थपेर नेपाली पढाइ मासे । र डुक्पाकै लुगा लगाउनुपर्ने नियम ल्याए । जनगणनाको निहु“ बनाई अनेकांै पितापुर्खादेखि बस्दै आएका परिवारलाई लखेट्ने प्रपञ्च रच्न थाले र न्याय माग्ने भटाभट जेल पर्न थाले । छोरीचेलीले आफ्नो इज्जत भन्न पाएनन् । सिंगो देश नै आतँकित भयो । नेपाली भाषीहरू रातको निद न दिनको भोक भए । तब बिस्तारै विद्रोहको आगो सल्किन थाल्यो । त्यो विद्रोहको आगोमा उनको सबै स्वाहा भयो । उनी लखेटिए, दाम्लाको वस्तुभाऊ, खेतबारीका बाली छाडी उनको परिवार रातारात भारत कटेर नेपाल आइपुग्यो । यी १७÷२० वर्षमा उनले जीवनका अनेकौं कुरुप पाटाहरू देखे । देख्न नहुनुुको पीडा स“गसँगै आफ्ना सन्तानको भविष्यको चिन्ताले उनी रात–रात भर निदाउन सक्दैनथे । शरणार्थी शिविरको भीडभाड हल्लाखल्ला, रोग, भोक, अनि शोकको कोलाजमा उनी निसासिन्थे । बिस्तारै यी सबै कुराको उनलाई बानी पर्दै गयो । केही चोटले ज्ञानी हुन्छ, धेरै चोटले बानी हुन्छ....... भन्ने गीतको मर्म बल्ल उनले बुझे ।
विश्वका आँखा भुटानी शरणार्थी समस्यामा केन्द्रित भएपछि हामीहरू भुटान छिर्न तम्सियौ“ र अब त हामीलाई अन्याय गर्न ठाडै नसक्ला नि भनी आ“ट जम्मा ग¥यौ“, तर भारतले मेची पुल तर्नै दिएन । भारतको रबैयाप्रति उनी आक्रोशित हुन्छन् । आउ“दा आफ्नै गाडीमा कोचीकोची नेपाल ल्याइदिने भारत किन हामीलाई आफ्नो देश छिर्न दि“दैन । आखिर उसको के स्वार्थ छ ? उनको प्रश्न उत्तरहीन भई वायुमण्डलमा उडिरहेको छ । बरा उनलाई के थाहा अदृश्य हातहरूले भुटानको रक्षा र अर्थ मन्त्रालय चलाइरहेको कुरा । भुटानी नागरिकको प्रमाणिकरणका नाटकमा पनि उनी सहभागी भए । अन्योल हतास अनि यथास्थितिको सिकार उनी जस्ता कैयन्का अगाडि तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापना गर्ने समाचारले केही आशाको सञ्चार गरिदियो ।
पुस्तौंपुस्ता अगाडिदेखि बसिआएको त भोटेले खेद्यो भने त्यो अमेरिकाबाट पनि खेदिहाल्छ नि । एक समूह शरणार्थी शिविरमा तेस्रो मुुलुकमा नजाने पक्षमा देखिए । उनलाई पनि ताप्केबाट फुत्किँदा भुङ्ग्रोमा त परिने होइन यस्तै सोचाइमा रह“दारहदै उनका छाप्रा वरिपरिका छाप्रा क्रमशः खाली हुन थाले । उनकी दिदी अनि भान्जाभान्जी पनि अमेरिका उडेपछि त उनको मन एक तमासको भयो । भुटानबाट भाग्दाको पीडाकी साथी दिदीबाट अमेरिकाको हाल बुझ्दा उनलाई अलिक आ“ट आयो ।
शरणार्थी लैजानुमा अमेरिकाको स्वार्थ छ छैन भन्ने कुरामा उनी आजकल आफ्नो सोचाइ दौडाइ रहन्छन् । उनी आउने जानेलाई सुनाउ“छन् । खै के भन्नु...., मैले पनि सुरुमा त जाने सोच बनाएको थिइन । कराइबाट झरेर भुङ्ग्रोमापो परिने हो कि भन्ने सोच थियो । यहा“ बसेर के गर्नु र ? यथास्थितिमा कति बा“च्नु नेपालको हालत पनि यस्तै छ । कुनै आशा गर्ने ठाउ“ छैन । आफू त ८÷१० वर्ष बा““चिएला तर छोराछोरीको के हुने हो । आफू नगइदिए छोराछोरी जान पाउन्नन् । यहा“ न नागरिकता छ न खेतीपाती, शिविरमा २० वर्ष त अरूले खुवाए । अब कति खुवाउलान् । एकदिन खुरुक्क पन्छिदिए भने ।
हामी भर्मन (भर्मोन्ट) जाने, दिदीहरू पनि त्यही“ हुनुहुन्छ । पहिले गएका आफन्तको ठाउ“मा पहिला फर्म भर्दा खुलाउनुपर्ने रहेछ । त्यतै पठाइदिँदो रहेछ, पछिका आफन्तलाई पनि । यसो भन्दै फर्साइला स्वभावका वेदनिधि आफ्नो अमेरिकाको तयारीको पेटारो फुकाउ“छन् । उनले उताका लागि लुगा फाटो, भा“डाकु“डा किनिसकेका छन् । अब उनको प्रि–ओरेन्टेसन, प्रि–मेडिकल मात्र बाँकी छ । टि.वी. केसलाई नलैजाने रहेछ । तीन दिन खकार चेक ग¥यो । अब लैजानु भन्दा अगाडि फेरि प्रि–मेडिकल चेक गर्छ अनि मात्र लैजान्छ ।
नेपाली जिब्रो न प¥यो उनले मःम बनाएर खानलाई भा“डाहरू किनेका छन् । बडाबाबुका छोराले उनलाई अमेरिका आउ“दा प्रेसर कुकर त्यतैबाट किनेर ल्याउनु भनेका छन् । खै किन हो यताको (अमेरिकाको) कुकर काम लाग्दैन पो भन्दैथिए हामीलाई मज्जाले गलाएर खानुपर्छ र पो हो कि ? जतिवटा फाइल छ । त्यति कुकर ल्याओ भने । उनको परिवारको ४ फाइल छन् । आफ्नो र श्रीमतीको एउटा जेठो छोरो, कान्छो छोरो माइलो छोरो र बुहारीको एक–एक गरी ४ वटा फाइल बनेका छन् । अतः उनी चारवटै कुकर लैजाने सुरमा छन् ।
उनी ट्याङ्काबाट अमेरिका लैजान पाइने र नपाइने चिजहरूको लिष्ट झिक्छन् । खुकुरी, माछा, मासु, सिन्दुर, गुन्द्रुक लैजान नपाइने रहेछ । जता गए पनि गुन्द्रुक र ढिडा“े त नेपालीको आहार नै हो । जे होस गुन्द्रुक त उतै बनाउन सकिन्छ । उता सबै सागसब्जी पाइन्छन् रे । स्कुसको तरुल, तामा, रायोको साग, मुला, तर सिलाजी र बिखमा पाइन्न रे कसरी हुन्छ ती चिज चाहिँ ल्याउनु भनेका छन् आफन्तले । लैजान त दिन्न तर लुकाएर लैजाने तरिका हजार छन् । भेट्यो भने पनि थपक्क निकाली दिन्छ रे, यो लैजान पाइन्न भन्छ रे । यस्तैयस्तै तैयारीका कुराहरू खेलाएर उनका दिनहरू बित्छन् अचेल ।
तेस्रो मुलुकमा लैजान थालेपछि शिविरका केटाहरू पढ्नमा मन गर्न छाडेको उनले पाएका छन् । सम्झाउ“दा यताको पढाइ काम लाग्दैन काका भन्नेहरूलाई उनी सक्दो बुझाउँछन् पढाइको महŒव । उनको जेठो छोरो १५ कक्षा पास छ, कान्छा र माइलाले १२ पास गरेका छन् । नेपालीले शिक्षाको महŒव नबुझेरै त हुन पछि परेका । यसोभन्दा उनी आफ्नो विगत सम्झन्छन् । आफूले ४ कक्षा पढ्दा–पढ्दै छोडेको सम्झेर थक्कथक्क मान्छन् । मलाई त त्यति दुःख हुन्न बोल्नलाई अलि–अलि सक्छु सामान किन्न सक्छु अम्रिकामा । उता गएर पनि टेर्निङ गराउने रहेछ । सकिन्छ हो लागि परेपछि । मेरी श्रीमतीलाई भने गाह्रो होला । उनलाई कहिलेकाही“ श्रीमतीको चिन्ताले सताउ“छ । के आइमाई के लोग्ने मान्छे सबैले पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने बल्ल उनले राम्ररी बुझेका छन् ।
अमेरिकासम्बन्धी अनेकौं मिथकबाट उनी अछुतो छैनन् । हाम्रा शिक्षित युवाको अमेरिकासम्बन्धी धारणा र उनका धारणा उस्तै छन् । उनले सुनेको अमेरिका त घरिघरि उनलाई नै विश्वास नलाग्ने रहेछ । अमेरिकामा पैसाको खानी नै छ । कतै कोही गरिब छैनन् लगायतका तत्कालै काम पाइने र मालामाला हुने सपनाबाट उनी पनि मुक्त छैनन् । उनी स्वप्निल हु“दै भन्छन् ‘गाडी त उता हामीले यहा“ साइकल किने जस्तो रे ।’
यतै शरणार्थी शिविरबाट अमेरिका गएका काकाले, डेढ वर्षमा यताको १६ लाख कमाउनुभयो भन्ने सुन्दा उनको अमेरिकासम्बन्धी धारणा अझ बलियो भएको छ । त्यसो त अमेरिकामा गएका शरणार्थीले दुःख पाएको पनि उनले सुनेका छन् । हालसालै उता गएका शरणार्थी झुण्डिएर मरेको घटना पनि पत्रिकामा उनले पढेकै हुन् । दुःख नपरी मानिस आत्महत्या गर्दैन । सोचेजस्तो नभएकोले झनै दुःख पाएकोले नै त उसले आत्महत्या ग¥यो होला । यी सुःख र दुःख, स्वर्ग र नर्क, यी ठीक र बेठीकका हिसाबमा उनी अलमलिएका छन् । कर्मवादीबाट आफूलाई पूरै भाग्यवादीमा ढालेर उनले ५ वर्ष बिताएर पाइने ग्रिनकार्डको सपनामा मग्न छन् । मान्छे आशाका ढोकाहरू बन्द भएपछि, मान्छे भाग्यको ढोका कुर्दछ र भाग्य वसन्त जस्तै हुन्छ शिविरको । चारैतिर फुङ्ग उडेका बिनालिपपोत भुटानको किनारमा छोडी आएको घर जस्तै । हावाहुरीले मटमैलो भएको साँ“झ जस्तै । कहा“ हुन्छ र सबैतिर उस्तै आकर्षक जस्तै रङ्गिन वसन्त ।